प्रचण्ड र ओलीलाई विद्यादेवी भण्डारीको लन्चः राष्ट्रपतिमा दोहोरिने ईच्छा ! - Everest Dainik - News from Nepal
प्रचण्ड र ओलीलाई विद्यादेवी भण्डारीको लन्चः राष्ट्रपतिमा दोहोरिने ईच्छा !
काठमाडौ, माघ २२ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पार्टी एकताको ‘घनीभूत’ छलफलमा रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग ‘लन्च मिटिङ’ गरेकी छन् ।
‘उहाँहरू (ओली-दाहाल) सँग राष्ट्रपतिज्यूको शनिबार शीतलनिवासमै भेटघाट भएको हो,’ डा.अधिकारीले भने, ‘अनौपचारिक भेटघाट भएकोले त्यहाँ हाम्रो सहभागिता रहने कुरा भएन, कुराकानी के भए त्यो पनि जानकारी हुने कुरा भएन ।’
याे पनि पढ्नुस आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्न राष्ट्रपतिको अनुरोध
याे पनि पढ्नुस राष्ट्रपति भण्डारी र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र एउटै कार्यक्रममा सहभागी हुने
राष्ट्रपतिको समेत राय बुझेका ओली-दाहालले एकता प्रक्रियाबाट भाग्न भने कसैलाई पनि अहिले छुट नभएको समान धारणा राखेका थिए । लन्च मिटिङबाट उठ्ने बेला ओलीले भनेका थिए, ‘एकता गर्नैपर्छ, हामी अझै फेरि छलफल गर्छौं, मिलाउँछौं ।’ -अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।